Ilaalinta deegaanka dabiiciga ah ayaa wali ahmiyada u leh naqshadeynta dharka dharka lagu tolo guga iyo xagaaga 2021
Xilligii goynta, tani waa mowduuc dhalinyaro iyo shaqsiba leh. Ka fogow inaad dadka kale la joogto, u doodista tibaaxaha toosan, yar, jab, iyo mid gaar ahba waa astaamaha jiilkan; jariddu waa qaabkooda fudud ee fudud, kaftanka iyo saaxiibtinimada leh ee muujinta, sidoo kale waa is-muujin firfircoon. Isla mar ahaantaana, hoos u dhigista ciyaarta iyo xiisaha booska ayaa noqotay hiddo-wadaag lama huraan ah iyo astaan ​​sumadeed oo loogu talagalay noocyada ganacsiga si ay u soo jiitaan jiilka soo koraya.
Marka loo eego falanqaynta iyo saadaasha isbeddelka iibka ee Horraantii Gu'gii 2021, ilaalinta deegaanka ee dabiiciga ahi waa diiradda naqshadeynta naqshadeynta dharka dharka ee guga iyo xagaaga ee 2021 ee Shiinaha Dharka Magaalada. T-shirt guga iyo xagaaga alaabada dharka lagu tolo ee 2021 waxay xooga saareysaa raaxada dabiiciga ah, shaqeynta iyo bey'ada. Laga soo bilaabo qaabka dunta, qaab dhismeedka dharka illaa dhammeystirka, waxay hagi doontaa horumarinta dharka, taas oo sidoo kale ka dhigi doonta guga iyo xagaaga dharka T-shirt ee dharka magaalada Shiinaha ee 2021 Midabada caanka ah ayaa noqday kuwo aad u kala duwan. Ku jajabinta daabacadaha cagaaran ee ku saleysan buuraha dushooda codadka zigzag iyo qaababka mooska ee dharka la tolay, naqshadeeyaha ayaa dareenkiisa dul saaray meel ka baxsan cirifka fog iyo cirka baaxadda weyn ee ku dahaadhan lamadegaanka. Waxay ikhtiraacday naqshad daabacadeed oo carruurnimo oo ah dayaxa iyo xiddigaha, oo mar labaadna soo koobtay muuqaalka qorrax dhaca, waxay ku koobtay qaab geesinimo isku xidhnayd. Mawduucyada kale waxaa ka mid ah tirooyinka fiirinaya qorrax dhaca iyo cirka xiddigta leh, oo matalaya naqshadeeyaha laftiisa, si loo xoojiyo loona qurxiyo xarig. Dusha sare ee waalan ee maradan moodada ah waxay ku qariyaan fikradaha hal-abuurka u gaarka ah naqshadeeye. Haddii aad si taxaddar leh ugu fiirsato, waxaad ogaan doontaa inay jiraan waxyaabo badan oo deggan, furaha hoose, oo aad u xiran karo oo ku qarsoon taxanaha oo dhan. Tusaale ahaan, dhar tolmo tayo sare leh ayaa umuuqda mid aad moodada. Noocyo isku dhafan oo qaybo badan ka kooban sida dun suufka xarka ah, dunta linenka ah ee cudbiga ah, dheeh qaybta sare leh, dun cawlan oo ubax leh, dhar suuf ah oo tiro badan oo jilicsan, jacquard midabo badan leh iyo intarsia dhar, dunta laalaadda leh, tolmo seddex geesood leh oo daabacan eexasho.
2021 Shiinaha Dharka Taga ee Xilliga Xagaaga / Xagaaga xulashada dharka T-shirt inta badan waxaa ku jira qaybaha soo socda: Cudbiga meeriska ah ayaa wali ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ganacsiga sare iyo funaanadaha xilliyada firaaqada ah sababtoo ah raaxo, neefsasho, jilicsan, duufaan u adkaysta, iyo jahwareer aad u fiican; alaabada suufka la sifeeyey waxaa u sabab ah Jilicsan oo raaxo leh, qaabka dharka ayaa ku habboon guud ahaan dadweynaha, wuxuu ku habboon yahay noocyada dhallinyarada ee caadiga ah; dharka suuf-semi-maaliyada ah ayaa ku soo noqonaya midabkii asalka ahaa ee shiraaca suufka, isaga oo sameysanaya fiditaan laba-geesood ah oo kala duwan, oo lagu daray tolmo go 'bamboo cudbi ah iyo feeraha yar yar ee dhibcaha leh. Sameynta suuf khafiif ah iyo gogosha linenka ah iyo dhar lama filaan ah oo fidsan oo fudud. Waxyaabaha suufka polyester-ka ah ayaa noqday xulashada koowaad ee isboortiga iyo astaamaha madadaalada iyadoo ay ugu wacan tahay sifooyinka ay u shaqeeyaan sida qoyaanka nuugista iyo dhididka, shucaaca anti-ultraviolet, iyo guryaha bakteeriyada. Qalabka dib-u-warshadayntu waxay ku daba jiraan ilaalinta macaamiisha macaamiisha. Deegaanka kaarboon-kaar-yar, waxay ku noqotay jeclaanta noocyada dharka, iyo noocyo isboorti oo badan oo ka jira dalka iyo dibaddaba waxay billaabeen inay adeegsadaan qalabka noocan oo kale ah baaxad weyn. Isla mar ahaantaana, waxaa laga arki karaa sahanka in saamiga dharka badan ee fiber-ka ee suuqa T-shaati si tartiib tartiib ah loo ballaarinayo sababtoo ah isbarbardhiga waxqabadkooda. Tusaale ahaan, dharka xariirta-suufku ma aha oo kaliya inay leeyihiin dareenka suufka, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin muuqaal jilicsan. Dharka ayaa leh iska caabin duuduub leh oo duudduuban oo aad u fudud in la daryeelo, oo leh tartan suuq oo adag. Isticmaalka qaab-dhismeedka qaabdhismeedka qaabdhismeedka yar-yar iyo qaababka warshadaha leh ayaa laga sameeyaa marada si caadi ah loo tolo oo lagu tolo maryo hal mar ah iyo dhar laba weji leh oo wearable ah, oo lagu daray naqshad midab dhexdhexaad ah Qaab-dhismeed u eg shandad, dharka la isku tolay oo leh tolmo tolmo tolmo leh oo lagu daray suufka caagga ah iyo qaababka la duubay ayaa deegaanka ka muuqda.
T / C caaga-suuf isku-darka 32S noocyo midab leh, T / C polyester-suuf isku-darka 32S tolmo dhar midab leh oo ku yaal magaalada dharka magaalada Shiinaha ee 2021 guga iyo dharka T-shirt ee xagaaga, iyo afarta gees ee dunta ku duuban dunta 32S dyeynta tolida Pique, funaanad jilicsan oo laba-geesood leh, midab tolmo leh, tolmo dhejisyo dun-midab leh iyo 40S suuf qabow Ao Dai, kartoon suuf daabacan oo loo yaqaan 'Lycra stretch', maaliyad rayon ah, 40S maaliyad suuf ah, 32S muraayadaha jiidan ee dhogorta, suufka jilicsan ee jilicsan, T / C maaliyada suufka T / C, T / C maaliyada suufka T / C, funaanada CVC, maaliyada funaanada CVC, daabacaadda jilicsan ee jilicsan, xariir caano ah oo jilicsan, Milk xariir caano ah Wool, suufka mesh mesh maro, 30S rayon tolmo wanaagsan, 30S rayon tolmo leh funaanad iyo 21S, 30S, 32S, 40S, 45S suufka jiidaya, cudbi Audrey, suufka midabka leh, dharka daabacan, dharka xarka leh ee caanaha leh, xarka xarka leh ee daabacan. tolmoon hawada wareejinaysa, funaanad T / R polyester viscose, 32S dunta Tencel cudbi cad, 40S dunta wanaagsan dunta, cudbi maro laba-geesood ah oo sawir gacmeed caday, toljiin cashmere laba-lakab, T / T marada saafiga ah ee caaga 32S faashad jilicsan oo dun-midab u eg, suuf tolmo ah oo aan lahayn maro jilicsan, suuf u eg maro jilicsan oo casaan ah, cawl cufan, cagaar sumurud, cagaar madow, buluug buluug ah, buluug cirka ah, midab jaalle dhexdhexaad ah, midab leh, liin cusub casaan, cagaar eggplant, kafee fudud iyo midabbo kale ayaa kordhin doona amarrada. Ka dib hawlwadeenada mihnadleyda ballaaran ee is-dhexgalka ee daabacaadda daabacaadda gudbinta ganacsiga caalamiga ah iyo daabacaadda meelaynta, waxay noqon doontaa mid caan ah. Farsamooyinka qaabdhismeedka khaaska ah ayaa sidoo kale iftiimaya, sida dunta tirada badan ee dhaadheer, maro adag oo qalloocan, xargaha daciifka ah, AB yardaha, qaybaha yar yar ee la madoobaaday, ubaxyada cawl ee ubaxa, dunta luuliga ah, fiilooyinka bamboo, moodeyaasha borotiinka ee moodeelka ah iyo kuwa soybiyanka ah, koobabka ammonia fibers, iwm. waxaa soo dhaweynaya suuqa. Adoo adeegsanaya wareejinta suufka dhaadheer ee tayada sare leh, dharka waxaa lagu tolay qaab dhismeed adag oo dhalaalaya. Isla mar ahaantaana, dharka daabacan waxaa doorbidi doona noocyo badan oo caalami ah, gaar ahaan dunta tirinta sare leh iyo dharka jacquard-ka sare leh oo lagu tolay makiinado wareegsan oo wareeg ah. Waa rookie ka mid ah dharka dhamaadka-sare. Qaybaha midabbada la mariyey, gaar ahaan qaybaha dhaadheer ee midabbada la mariyey, sida 120S / 2 iyo 80S / 2 yarns, waxay leeyihiin midabyo kala duwan, saamaynta muuqaalkooda gaarka ahna waxay samaysay naqshadeeyayaal badan oo naqshadeeyayaal ah. Shiinaha Dharka Magaalada 2021 Guga / Xagaaga tolmo ah dharka T-shaati 32S saafiyad caag ah oo midabkeedu yahay midab leh T-shaati afar gees ah iyo 118D matte FDY, 100DDTY daabacaadda dhijitaalka ah ee T-shaati afar gees ah, daabacaadda dhijitaalka ah iyo taxanaha dijitaalka ah T-shaadhadh T-funaanado tolmo leh leh oo afar waji leh, dahab lagu rusheeyey iyo budo lacag ah iyo naxaas leh ayaa dhinacyada oo dhan ka fidsan, qaabka dib u cusboonaysiinta ayaa ka faa'iideysanaya suuqa. Gaar ahaan, 118DFDY tolmo daabac ah oo laba dhinac ah oo fidsan oo T-shaati ah iyo 118DFDY oo lagu duubay daabac dhar afar-geesood leh oo T-shaati ah ayaa xisaabtami doona inta badan suuqgeynta.